I-XPZ izoba embukisweni we-BCEIA 2021
BCEIA2021 Exhibition, The Beijing Conference and Exhibition on Instrumental Analysis (BCEIA) yasungulwa ngo-1985 ngokugunyazwa uMkhandlu Wombuso. Ngo-1986, i-China Analysis and Testing Association yasungulwa ukwenza umsebenzi obalulekile wokusingatha i-BCEIA. Ukunamathela ku-visio ...
Ungacabanga ukuthi i-glassware washer imfushane futhi ihlakaniphe kakhulu kunalokho ucabanga?
“Umshini omkhulu kangaka, kumele ube yinkimbinkimbi kakhulu ukuwusebenzisa” “Kunezinhlobo eziningi zamabhodlela nezitsha elabhorethri yethu, kufanele kube nzima ukukubeka? Mhlawumbe kufanele zigezwe ngokwehlukana? Kumele kudle isikhathi, kulungile ”“ Faka ibhodlela bese ugeza, unga ...
Izinkulungwane zamabhodlela omjovo zilinde ukuhlanzwa ngosuku, ukuthi ungaxazulula kanjani?
+ Ukuhalalisela kokuqala iQingdao Spring Pharmaceutical Machinery Fair iphethwe ngempumelelo! I-Hangzhou Xipingzhe Instruments Technology Co., Ltd ihlonishwe kakhulu ukuhlangabezana namakhasimende amaningi. Embukisweni Wezemishini Yemithi, sifunde kabanzi ngezidingo zamakhasimende amaningi, kanye nekhasimende ...
Ungayihlanza kanjani i-glassware yaselebhu ngokushesha futhi kalula?
Ukuhlanza i-glassware bekulokhu kuwumsebenzi wansuku zonke elabhorethri. Ezinsalela ezahlukahlukene ngemuva kokuhlolwa, izinyathelo zokuhlanza, izindlela zokuhlanza, kanye nenani lotion nakho kwehlukile, okwenza izilingo eziningi ezintsha zizwe ikhanda. Ngakho-ke singawahlanza kanjani amabhodlela engilazi ngokushesha okukhulu njenge-possib ...
Izinto ngokugeza elabhorethri
Umbuzo wokuqala: Singakanani isikhathi esidingekayo ukugeza amabhodlela ngosuku olulodwa locwaningo lwesayensi? Umngani 1: Ngenze isilinganiso sokushisa samakhemikhali asezingeni eliphakeme cishe unyaka owodwa nohhafu, futhi kuthatha cishe ihora elilodwa ukugeza amabhodlela nsuku zonke, okwenza u-5-10% wocwaningo lwesayensi ...
Ukuphepha kwezimonyo kuncike ekunembeni kokuhlolwa
Okhilimu abenza mhlophe, izifihla-buso zobuso, okokugcoba ukunakekelwa kwesikhumba, odayi bezinwele… Kulezi zinsuku, kunezinhlobonhlobo zemikhiqizo yezimonyo emakethe futhi ziyavela ngokungapheli, ezithandwa kakhulu ngabathandi bobuhle. Kodwa-ke, izimonyo zisetshenziselwa ukunakekelwa kwesikhumba nokwenza ubuhle besikhumba futhi ...
I-anti-cross-contamination, ukuhlolwa kwe-DNA okuthembekile kungaveza iqiniso emakhoneni afihlekile
Kumabhayisikobho amaningi nasemisebenzini yokubhala, amalabhorethri abhekele phambili kwezomthetho abonakala njengobukhona obubalulekile futhi obubalulekile, ikakhulukazi icebo lokuhlola ubunikazi be-DNA livame ukuba ngukhiye wokuthola izinkomba nokuxazulula amacala. Kodwa-ke, uma ukunemba kwemiphumela yokuhlolwa okwethulwayo kungabaza, ngokwemvelo ngeke ...
Imboni yezemithi-yisiphi isixhumanisi esibaluleke ukudlula ukubulala amagciwane nokubulala inzalo
Muva nje, inkampani yezokwelapha iphenyiwe futhi yabhekana neziphathimandla ezifanele ngenxa yezingozi ezingaba khona zokuphepha ohlelweni lokuphathwa kwekhwalithi futhi yaphoqelela inkampani eyenza imithi ukuba imise masishane umkhiqizo wokulungiswa kabusha, kanye "nomuthi wokuqala we-GMP̶ wenkampani ...
Ingabe i-laboratory glassware washer ezenzakalelayo ilula ukuyisebenzisa?
I-othomathikhi ye-glassware washer ayimangazi kubasebenzi abaningi bokuhlola. Yize kunezici eziningi ezahlukahlukene zomkhakha phakathi kwamalabhorethri, njengeminyango kahulumeni enama laboratories ohlelo lwezempilo, ukuhlolwa kokuphuma nokuphuma kanye namalabhorethri ohlelo lokuhlukaniswa, ukudla nezidakamizwa ...
Amanzi, ama-reagents, ama-glasswares, uma kukhona ukuhlolwa kokudla okungafanelekile, kuzobuzwa ubuqiniso bemiphumela yokuhlolwa kokudla.
Izinkinga zokuphepha kokudla zihlobene nempilo yawo wonke umuntu, ngakho-ke bekulokhu kugxilwa emphakathini njalo. Ikakhulukazi eminyakeni yamuva nje, ngezimo zezinto ezibonakalayo zabantu nokuthuthuka okuqhubekayo kwamazinga okuphila, isidingo sokuhlolwa kokudla siye saqhubeka sanda. Ku ...
Qala ngokuhlanza i-glassware kahle! Ukuguqulwa okuhlakaniphile okujwayelekile kwelebhu kwenza kanjena .- - I-glassware washer ezenzakalelayo
Ngokuthuthuka okusheshayo kwesayensi nobuchwepheshe, ukuthambekela okuhlakaniphile kuthinta zonke izici zethu. Ngokwemvelo, ama-laboratories anezinto eziningi zesayensi awashiwo. Kodwa-ke, yize izinhlangano eziningi zemboni zinamalabhorethri, kepha izinga lazo lokufakwa kwedijithali okuhlakaniphile liyi-actu ...
Ukhisimusi omuhle nonyaka omusha omuhle!
Ukhisimusi omuhle nonyaka omusha omuhle! I-Hangzhou Xipingzhe Instruments Technology Co., Ltd Sikufisela wena nomndeni wakho Impilo, Ukuthula, Uthando Lenjabulo nenjabulo kulo lonke ukhisimusi nonyaka ozayo! XPZ kuyinto ukwenziwa ehamba phambili laboratory glassware washer, elise Hangzhou edolobheni, Zhe ...